August 2020 - ShwengweGames
သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်‌နေ့ အသက်(၂၉) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို ပြောပြလာတဲ့ နီနီခင်ဇော်
August 31, 2020 by Shwengwe Games
ဒီနေ့ကတော့ သူမရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။နီနီခင်ဇော်ကတော့သူမရဲ့ အသက်(၂၉) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးမှာရင်ထဲက ခံစားချက်တချို့ကိုအခုလိုပြောပြလာပါတယ်။
ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိပြီးဂီတလောကမှာအောင်မြင်မှုရရှိထားတဲ့အဆိုတော် နီနီခင်ဇော်ကတော့ဒီနေ့ (သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်)မှာအသက်(၂၉) နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအားငယ်နေတဲ့ အချိန်တိုင်းအားပေးနိုင်ဖို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သာ ရှိနေခဲ့တယ်လို့ဆိုလာပါတယ်။
” Happy 29th Birthday ကျွန်မအားငယ်နေတိုင်းကိုယ်ကိုကိုယ့်ထွေးပွေ့ထားနိုင်ဖို့ ကျွန်မမှာလက်အစုံရှိခဲ့တယ်။လဲကျတဲ့အချိန်တိုင်းပြန်ထဖို့ ခြေအစုံပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ အဆင်ပြေသွားမှာပါဆိုတဲ့အားပေးစကားပြောပေးဖို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိခဲ့တယ်။ဟိုးတိမ်လွှာတွေအထိပျံသန်းနိုင်ဖို့ ပရိသတ်ခွန်အားတွေနဲ့တစတစစီပြုလုပ်ထားတဲ့အတောင်အစုံရှိခဲ့တယ်။ “ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိတယ်” (ယနေ့အချိန်အထိကောင်းရာတွေကို သင်ပြပေးခဲ့တဲ့တည့်မတ်ပေးခဲ့တဲ့မိဘ ၊ဆရာသမား ၊သူငယ်ချင်းများ၊ပရိသတ်များကိုကျေး ဇူးတင်လျှက်)” ဆိုပြီးတော့ သြဂုတ်လ (၃၁) ရက်နေ့ မနက် ၈ နာရီက သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နီနီခင်ဇော်ကတော့ ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့ အမှတ်တရလေးအဖြစ် “HOPE” ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို သူမရဲ့ Ni Ni Khin Zaw Youtube Channel မှာ ပရိသတ်တွေနားထောင်လို့ရအောင် မိတ်ဆက်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီသီချင်းဟာ နီနီခင်ဇော်အတွက် ဘဝဖြတ်သန်းမှုတွေအကြောင်းကို ထည့်သွင်း သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့လည်း သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။
နီနီခင်ဇော်ဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လ(၁၃) ရက်နေ့မှာတော့ ဂီတသက်တမ်း (၁၂) နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။သူမကတော့ Melody World 2008 ခုနှစ် သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲကနေ တဆင့် မြန်မာပြည်ရဲ့ဂီတလောကတွင် ထင်ရှားလာပြီး နိုင်ငံတကာထိထင်ရှားကျော်ကြားသောဂီတပညာ ရှင်တစ်ဦးအဖြစ် Best in Music ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်က Myanmar’s Pride Award 2019 ဆုကိုလည်း နီနီခင်ဇော်က ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာဂီတနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းမှာရရှိထားတဲ့ ဆုတွေနဲ့ ပြည်ပကချီးမြှင့်ထားတဲ့ ဆုတွေ အပါအဝင်ဆုစုစုပေါင်း (၁၃) ဆု ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဂီတဘက်မှာထူးချွန်ပေမယ့်သရုပ် ဆောင်အလုပ်ကိုလည်းဝါသနာပါသူဖြစ်တာကြောင့် “အိပ်မက်ကာရန်” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးထဲမှာ နီနီခင်ဇော် ကအကယ်ဒမီနေတိုးအတူပါဝင်သရုပ် ဆောင်ထားပါသေးတယ်။ဒီဇာတ်ကားဟာသူမကိုယ်တိုင် ရေးထားတဲ့ ဇာတ် လမ်းလေးဖြစ်တယ်လို့လည်း Duwun ကို ဖြေဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ နီနီခlင်ဇော်ဟာ အချစ်သီချင်းပေါင်းများစွာနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အဆိုတော် တစ်ဦးဖြစ်သလို ‘’ဂယ်ဘဲ ဂယ်ဘဲ’’၊ ‘’Super Red’’ ၊ ‘’U’’ စတဲ့ အခွေတွေ ထွက်ရှိပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ပါ။သူမက Covid ကာလမှာလည်း ပရဟိတအလှူအတွက်အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဦးဝင်းနိုင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ငွေကျပ် (၁၀) သိန်းထောက်ပံ့လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ်
August 30, 2020 by Shwengwe Games
သရုပ်ဆောင်မြင့်မြတ်ကတော့ အလှူ အတန်းနဲ့ ပတ်သက်လာရင် လက်မနှေးတဲ့ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ ကျန်းမာရေး မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ လူရွှင်တော် ဟာသသရုပ်ဆောင် ဧရာကိုလည်း ကျန်းမာရေး ထောက်ပံ့ငွေ သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့သေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ COVID-19 ကာလမှာလည်း မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်အတွင်းက စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ ကြုံနေရသူတွေအတွက် ဆန် တွေပေးဝေလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် သရုပ်ဆောင် ယုန်လေးတို့နဲ့ အတူ ဆေးရုံကြီးတွေမှာ လိုအပ်တဲ့ ဆေးပစ္စည်းတွေ လှူဒါန်းနိုင်ဖို့ ငွေကျပ်(၁၀) သိန်းလှူဒါန်းခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ဝေဘာဂီဆေးရုံကြီးမှာလည်း ငွေကျပ် (၁၆၂) သိန်း တန်ဖိုးရှိ ဆေးပစ္စည်းတွေလည်း လှူဒါန်းခဲ့ပါသေးတယ်။
သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ် နဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ မခင်သူအောင် တို့ဟာ ကျန်းမာရေးမကောင်းဖြစ်နေရှာတဲ့ ဟာသလူရွှင်တော်ကြီး ဦးဝင်းနိုင်(အနုပညာ) အတွက် ငွေကျပ်(၁၀) သိန်း ထောက်ပံ့လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ ဦးဝင်းနိုင်ရဲ့ သမီးဖြစ်သူ မသဇင်ဆုဝေလွင်က ပြောပါတယ်။
” ဖေဖေ့အတွက်ကူညီထောက်ပံ့ငွေ 1000000 (၁၀)သိန်းကျပ်လှူဒါန်းပေးပါသောကိုမြင့်မြတ်တို့ဇနီးမောင်နှံအားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်”ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာထက်ကနေ ရေးသားခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ မြင့်မြတ် ရဲ့ အလှူအတွက် ဦးဝင်းနိုင်တို့ မိသားစုကလည်း ကျေးဇူးတင်ခဲ့ကြသလို ပရိသတ်တွေကလည်းသာဓု (၃) ကြိမ် ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါသေးတယ်။
လူရွှင်တော်ကြီး ဟာသသရုပ်ဆောင် ဦးဝင်းနိုင်ကတော့ အသက် (၆၆) နှစ်အရွယ်မှာ ပထမဆုံး လေဖြတ်ခဲ့တာကြောင့် ဆေးကုသမှု ခံယူပြီး နေပြန်ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အသက် (၇၄) နှစ်အရွယ်မှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် လေပြန်ဖြတ်ခဲ့တာကြောင့် လက်ရှိအချိန်ထိ ဆေးကုသမှုခံယူနေရတုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာ ရေးမကောင်းတာကြောင့်လည်း အနု ပညာအလုပ်တွေလည်း အလှမ်းဝေးကွာနေခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
တိုင်ရွန် က ကန်တော့ပြီး လာတောင်းပန်မယ်လို့ ဖုန်းဆက်ခဲ့ကြောင်းအချို့ကိ စ္စတွေကြောင့်စိတ်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းပြော ပြခဲ့တဲ့ ယုန်လေး
ပရိ သတ်ကြီးရေယုန်လေးကတော့ လတ်တလောဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့တိုင်ရွန်ကဖုန်းဆက်ပြီးလာကန် တော့ပြီး တောင်းပန်ဖို့ပြောခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေကို အခုလိုပဲ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကငယ်ငယ်ထဲက “ပြည့်စုံတာတဝက် မပြည့်စုံတာတဝက်” အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းကြီးလာရတယ်။ အမြဲတမ်းအကောင်းကြီးပဲ အမြဲမရဘူးဗျာ။ ကျွနါတော်ငယ်ငယ်တုန်းကအဖေအမေက အဲ့လောက်ကြီးအဆင်မပြေဘူး။ အဆင်ပြေတဲ့ လူတန်းစားဆိုပေမယ့် ချမ်းသာတဲ့အထဲမှာမပါဘူး။ အဖေနဲ့အမေ ဆုံးသွားခဲ့ပေမယ့် မွေးစားခဲ့တဲ့ အဖိုးနဲ့အဖွားက အရမ်းချမ်းသာတယ်။ အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခု အမြဲတမ်းဆုံနေတယ်။ ကျွန်တော့်သီချင်း “အချစ်အတွက် ကံမကောင်းခဲ့သူ” လူသိတယ်။ ကျွန်တော် ထောင်ကျသွားတယ်။
အဲ့လိုမျိုးပဲ အောင်မြင်မှု ပျော်ရွှင်မှု စိတ်ချမ်းသာမှုကို တစ်ခုထဲ ကောင်းကောင်း ဘယ်တော့မှမရဘူး။ ကျွန်တော် အဆိုးတွေ ရင်ဆိုင်ပြီးမှရတယ်။အခုလဲ အောင် မြင်တယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ကံနဲ့ ကံဇာတာကို ပြောပြတာပါ။အဲ့လိုဆိုတော့ ကျွန်တော့မှာ ငယ်ငယ်ထဲက မိဘမဲ့ဆိုတော့ လူတိုင်းက သိမှာပါ ” ကျွန်တော့မှာလဲ ရိုင်းတဲ့စိတ်ကခံထားတာ အရမ်းသိမ်ငယ်တတ်တဲ့ စိတ်ကို ဒါကတော့ ကိုပဲသိမှာပါ”။
အခုကတော့ အေးအေးချမ်းချမ်းနေတယ် ဘုရားတရားလေးတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာ ဘုရားရောက်ရင် အေးချမ်းပါတယ်။ ကျွန်တော့မွေးနေ့ (၁၃)ရက်နေ့မှာတော့ ဘယ်သူ့အကူအညီမှမယူဘယ်သူ့ဆီကမှ အလှူမခံဘဲ ကျွန်တော် တတ်နိုင်တဲ့အတိုင်း နှစ်တိုင်းလှူပါတယ်။ဘာသာကြီး(၄)ခုလုံးကိုလိုက်လှူပါတဲ့အ ကြောင်းယုန်လေး ကပြောခဲ့ပါတယ်။
စိတ်ထဲမှာတော့ စိတ်ဒဏ်ရာရသွားတာရှိတယ်။ တစ်ခုခု တိုးတိုး တိုးတိုးပြောနေရင် အဲ့တုန်းကငါ့ကိုဆဲသွားတဲ့ သူတွေလားမသိဘူးဆိုပြီး ဖြစ်မိတယ်။ အဲ့တော့ ဘုရားစာလေးရွတ်ပြီး စိတ်ထဲကဖျောက်လိုက်တယ်။ ဖျောက်ပြီးတော့ အဲ့လိုပဲနေရတာပေါ့။
ကျွန်တော်မကြောက်တာ တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော့ရဲ့ စိတ်ရင်းကို သိတဲ့သူတွေ သူငယ်ချင်းတွေ ပေါင်းတဲ့သူတွေ အကုန်သိပါတယ်။ “ကျွန်တော် စိတ်ကောင်းရှိလား လူတွေကို ကူညိတတ်လား အဲ့လိုမျိုး နင်းပြီး တက်တတ်လားဆိုတာ” သူတို့ အကုန်သိမှာပါ။ ဆိုတော့ အချိန်ကစကားပြောသွားမှာပါ။ ကျွန်တော့ကို အထင်လွဲနေတဲ့ လူကောင်းသူကောင်းတွေလဲ အများကြီးရှိပါတယ်။
အဲ့တော့ အဲ့လူတွေလဲ ကျွန်တော်ဘာလို အကျင့်စာရိတ္တရှိတဲ့သူလဲသူတို့ အထင်လွဲနေသလို ဟုတ်လား မဟုတ်လားဆိုတာ အချိန်တန်ရင်အချိန်က သက်သေပြသွားမှာပါ။ မျက်နှာဖုံးဆိုတာလဲ တပ်ထားလို့ရရင် ခဏပါ။ အချိန်တန်ရင် ကွာမှာပဲလေ။ အဲ့တောကြောင့်ကျွန်တော်လဲ တကယ် မကောင်းတဲ့ကောင်ကြီးဆို အချိန်တန်ရင် ကွာမှာပေါ့။ဒါတွေက အလှူနဲ့ ဖုံးလို့လဲမရဘူး။ လျှောက်လှူပြနေပြီး ဖုံးလို့လဲမရဘူး။ ဒါတွေက အချိန်တစ်ခုက စကားပြောသွားလိမ့်မယ်လို့ ယုန်လေးက ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လိုသင်ခန်းစာတွေရခဲ့လဲဆိုတော့ “ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ ကလဲ့စားလဲ မချေတတ်ဘူး၊ ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ အမှတ်သဲချေမရှိဘူး၊ ကျွန်တော် အကုန်လုံးကို နားလည်တယ်၊ ခွင့်လွှတ်တယ်” လို့ ယုန်လေးက ပြောခဲ့ပါတယ်။
ညီလေးတိုင်ရွန်လဲ “အကိုကြီး ကျွန်တော်လာ ကန်တော့ချင်လို့ တောင်းပန်တယ်” ဆိုပြီးဖုန်းဆက်ခဲ့တာ်လို့ ယုန်လေးက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ “ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟျောင့် မင်းရယ် ငါရယ် ညီအကိုပဲ အေးဆေးပဲ နောက်မင်းအဲ့လို မလုပ်နဲ့ပေါ့ အေးဆေးပဲ” ဆိုပြီး ပြန်ဖြေခဲ့တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူ့အပေါ်လဲ မုန်းတာလဲ မရှိဘူး ဘာမှမရှိဘူးတကယ်ဘာမှမရှိဘူး။ ကျွန်တော်အကုန်လုံးကို ချစ်တယ်။ ဒီတိုင်းပဲ အရင်တုန်းက ” စောက်ချိုးမပြေဘူးကွာ ယုန်လေး ဒီကောင်ဆို ရိုင်းတယ်” လို့ လူတချို့က ပြောဆိုနေကြတဲ့ ဘဝကြီးကို ဖျောက်ချင်နေတာကြာပြီလိုါ ယုန်လေးကိုယ်တိုင် ထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ဘုရားတရားလဲပိုလုပ်ပြီး လူတိုင်းကိုလဲ အရင်ကထက်ပိုပြီး မေတ္တာထားတယ် အညှိုးအတေးကတော့ နဂိုထဲကမရှိတာ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ ရှိတာပေါဗျာ။
ကျွန်တော့ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ အပြည့်အဝ ရပ်တည်ပေးတဲ့သူကို ကျွန်တော့ကြောင့် စိတ်ထိခိုက်တဲ့သူ အဲ့တာတွေကတော့ ခေါင်းထဲရှိမှရမှာ။ ပြောနေကြတဲ့ ယုန်လေး ကျရှုံးသွားပြီ။ဘာအလုပ်မှမလုပ်ရတော့ဘူး ရုပ်ရှင်တွေလဲမရိုက်ရတော့ဘူး ကားတွေလဲ မရိုက်ရတော့ဘူး သွားပြီ။ အဲ့ကျရှုံးသွားတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ကတော့ ကျရှုံးအောင် မနေပါဘူး။ လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေနဲ့ ရပ်တည်လို့ရအောင်လုပ်မယ်။ကျွန်တော့်နောက်မှာလံ ကျွန် တော်ထောက်ပံ့တဲ့ မိသားစုတွေရှိတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ နောက်တစ်နှစ် ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်လိုရတာနဲ့ လုပ်လို့ရမယ့်ဟာတွေ တန်းစီုပီး ဦးနှောက်ထဲ ထည့်ထားမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ယုန်လေးနဲ့ တိုင်ရွန်နဲ့ ပြန်လည် သင့်မြတ်သွားတဲ့အပေါ် နှစ်ဖက်လုံးက ပရိသတ်တွေလဲ ကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ယုန်လေးအတွက်လဲ ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ခွင့်မရပေမယ့်လဲ ကြော်ငြာတွေရိုက်ရင်း အခြားစီးပွားရေးတွေလုပ်ရင်း ယုန်လေးအပေါ် မှီခိုနေကြတဲ့ မိသားစုတွေအတွက်လဲ ပိုမိုထောက်ပံ့နိုင်ပြီး အလှူအတန်းတွေလဲ များများလုပ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလဲ ပရိသတ်ကြီးရဲ့ အမြင်ကို ကော်မန့်မှာရေးသွားကြဦးနော်။ အခုလိုဖတ်ပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
“စုန်းစုတ်တယ်လို့ပြောကြတဲ့ အရေပြားပေါ်မှာ အညိုအမည်းကွက်တွေပေါ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းများ”
တခါတလေဘာမှတိုက်မိခိုက်မိတာမရှိဘဲနဲ့ အရေပြားပေါ်မှာအညိုအမည်းကွက်တွေပေါ်လာရင်ဘာကြောင့်လဲ၊ ဘယ်လိုပျောက်အောင်လုပ်ရမလဲ စဉ်းစားရခက်နေတာမျိုးဖြစ်ရပါတယ်။ဒီလိုအညိုကွက်တွေဖြစ်ရတာအကြောင်းရင်းတချို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပြီးသင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့လည်းတိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေပါတယ်။ဒီတော့အရေပြားပေါ်မှာ အညိုအမည်းကွက်တွေပေါ်ရတဲ့အ ကြောင်းရင်းနဲ့သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအ ခြေအနေကိုသိရဖို့ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။
တခါတရံ အရမ်းလေးတဲ့ပစ္စည်းတွေ မ,လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဆံချည်မျှင်သွေးကြောလေးတွေ ပြတ်သွားပြီးအရေပြားပေါ်မှာအညိုအမည်းကွက်တွေဖြစ်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကခံနိုင်တာထက်ပိုတဲ့ အလုပ်တွေလုပ်မိသွားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်တာကြောင့်နောက်ဆိုဒီလို လေးပင်တာတွေမ,တဲ့အခါဆင်ခြင်လိုက်ပါ။
သံဓာတ်အားဖြည့်ဆေး၊ အရောင်လျော့ဆေးနဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေသောက်ထားတာကြောင့်လည်း ဒီလို အညိုကွက်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ဆေးသောက်ထားတဲ့နေ့တွေမှာ အဲ့ဒီလို အညိုအမည်းကွက်တွေဖြစ်လာတယ်လို့ သတိထားမိတယ်ဆိုရင်တော့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းသွေးကြောတွေမှာ သွေးယိုစီးမှုတွေဖြစ်နေနိုင်တာကြောင့် ဆရာ၀န်နဲ့သေချာပြသပြီး စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
အရေပြားပေါ်ကအညိုအမည်းကွက်တွေဟာသွေးရောဂါတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအညိုအမည်းကွက်တွေပေါ် လာတဲ့အချိန်မှာ ခြေထောက်ရောင်ရမ်းနာကျင်တာ၊ သွားဖုံးသွေးယိုတာ ၊ နှာခေါင်းသွေးထွက်တာနဲ့ အရေပြားအပေါ်လွှာမှာ သွေးကြောပြတ်ရာလေးတွေတွေ့နေရပြီဆိုရင်တော့သွေးကင်ဆာလိုရောဂါမျိုးကြောင့် ဖြစ်နေနိုင်တာမို့ ချက်ချင်းဆေးစစ်ဖို့လိုပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဗီတာမင်ဓာတ်တစ်မျိုးမျိုးချို့တဲ့နေတဲ့အချိန်မှာလည်း အရေ ပြားပေါ်မှာ အညိုအမည်းကွက်တွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ဗီတာမင်၊ အာဟာ ရဓာတ်ချို့တဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ အညို အမည်းကွက်တွေကတော့ထိလိုက်ရင် နာကျင်မှုမရှိပါဘူး။ဒီအခြေအနေဆိုရင်တော့သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဗီတာမင် B12 ၊ ဗီတာမင်ကေ နဲ့ ဗီတာမင် စီ အဓိကလိုအပ်နေတာပါ။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟော်မုန်းပမာဏမညီ မျှခြင်းကြောင့်လည်း အရေပြားပေါ်မှာ အညိုကွက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေမှာအီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်းနည်းနေမယ်ဆိုရင်ဆံချည်မျှင်သွေးကြောလေးတွေကိုအားနည်းစေပြီး ပြတ်ထွက်တဲ့အထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာ အရေပြားတစ်သျှူးတွေက အားနည်းလာပြီး ကျုံ့ဆန့်နိုင်စွမ်းလည်းနည်းလာပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါအရေပြားအောက်မှာရှိတဲ့ သွေး ကြောလေးတွေလည်း အားနည်းလာပြီး ပြတ်လွယ်လာတာကြောင့် အဲ့ဒီနေရာတွေမှာ အညိုကွက်တွေဖြစ်လာပါတယ်။
အရေပြားပေါ်ကအညိုအမည်းကွက်တွေဟာ ဆီးချိုရောဂါရဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ သွေးထဲမှာ သကြားဓာတ်များနေတဲ့အခါ သွေးလှည့်ပတ်မှုကို ကမောက်ကမဖြစ်စေနိုင်ပြီး အရေပြားပေါ်မှာ အညိုအမည်းကွက်တွေလွယ်လွယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တခါတလေ ထိခိုက်မှုက မပြင်းထန်ပေမယ့် အညိုကွက်က အကြီးကြီးပေါ်နေတာမျိုး၊ အနာမကျက်လွယ်တာမျိုး၊ အရေပြားပေါ်မှာ အဖြူရောင်အကွက်လေးတွေဖြစ်တာမျိုးနဲ့ မျက်စိမှုန်တာတွေ တပြိုင်တည်းဖြစ်နေရင်တော့ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နိုင်ချေများနေတာကြောင့် ဆရာ၀န်နဲ့ပြသင့်ပါပြီ။
လေဆိပ် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ လူနာ အမှတ် ၇၄၁( မ ၂၆ နှစ်)နှင့် ထိတွေ့ဆက်စပ်သူ ၁၅ဦးခန့်ကိုကွာရတင်းစင်တာသို့ ပို့ဆောင်
လေဆိပ် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ အမှတ် ၇၄၁( မ ၂၆ နှစ်)နှင့် ထိတွေ့ဆက်စပ်သူ ၁၅ဦးခန့်ကိုကွာရတင်းစင်တာသို့ ပို့ဆောင်
ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ယနေ့(သြဂုတ်လ ၃၀ရက်) နံနက် ၈နာရီနာရီထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါဝင်လာသော မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှ ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ အမှတ် ၇၄၁( မ ၂၆ နှစ်)သည် လေဆိပ် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၎င်းနှင့် ထိတွေ့ဆက်စပ်သူ ၁၅ဦးခန့်ကို ယနေ့တွင် ကွာရတင်းစင်တာသို့ ပို့ဆောင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်လွင်က ပြောသည်။
အဆိုပါ ကိုဗစ်လူနာသည် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ကျောက်ရေတွင်း ရပ်ကွက် ရွှေဘုန်းပွင့် ဘုရားအနီးတွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ပြည်ပသို့ ခရီးသွားလာမှု ရာဇဝင်မရှိ ၊ ရောဂါပိုးရှိသူ နှင့် ဆက်စပ်မရှိဘဲ အင်းစိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှ စောင့်ကြည့်လူနာတစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
Credit-Pyi Myanmar #မြောက်ဥက္ကလာ #လေဆိပ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း
က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ယေန႔(ၾသဂုတ္လ ၃၀ရက္) နံနက္ ၈နာရီနာရီထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါဝင္လာေသာ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုဗစ္အတည္ျပဳလူနာ အမွတ္ ၇၄၁( မ ၂၆ ႏွစ္)သည္ ေလဆိပ္ လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၎ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္စပ္သူ ၁၅ဦးခန႔္ကို ယေန႔တြင္ ကြာရတင္းစင္တာသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္လြင္က ေျပာသည္။
အဆိုပါ ကိုဗစ္လူနာသည္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေက်ာက္ေရတြင္း ရပ္ကြက္ ေ႐ႊဘုန္းပြင့္ ဘုရားအနီးတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ျပည္ပသို႔ ခရီးသြားလာမႈ ရာဇဝင္မရွိ ၊ ေရာဂါပိုးရွိသူ ႏွင့္ ဆက္စပ္မရွိဘဲ အင္းစိန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးမွ ေစာင့္ၾကည့္လူနာတစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
Credit-Pyi Myanmar #ေျမာက္ဥကၠလာ #ေလဆိပ္လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္
နဂါးမောက်သီး စားသုံးခြင်းရဲ့ကောင်း ကျိုး ၅ ခု
နဂါးမောက်သီးတွေဟာ အရင်တုန်းကတော့ တောင်အမေရိကမှာသာ စိုက်လို့ရတာမှန်ပေမယ့်အခုနောက်ပိုင်းမှာ တော့ အာရှနိုင်ငံတွေမှာပါစိုက်ပျိုးလို့ရနေတာကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာ အလွယ် တကူ ဝယ်လို့ရတဲ့ အသီးအနှံတမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ နဂါးမောက်သီးကြိုက်သူတွေအတွက်သတင်း ကောင်းတခုဖြစ်သလိုအခုမှ စစားမယ့်သူတွေလည်းသိထားသင့်တဲ့နဂါးမောက်သီးရဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျော့ကျစေတယ်
နဂါးမောက်သီးကို အစာမစားခင် စားပေးမယ်ဆိုရင်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ နဂါးမောက်သီးမှာပါဝင်တဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့ဖော့စဖိတ်ဓာတ်တွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ဖြစ်စဉ်တွေကို ကောင်းမွန်စေပြီး
အစားအစာတွေမှာပါဝင်တဲ့ အဆီဓာတ်နဲ ကိုလက်စထရောတွေကိုလျှော့ချပေးနိုင်တာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းလိုသူတွေနဲ့ အထူးပဲ သင့်တော်ပါတယ်။
(၂) ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေတယ်
နဂါးမောက်သီးမှာပါဝင်တဲ့ဗီတာမင်စီဓာတ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေတာကြောင့် ကိုယ်ခံအားကို မြင့်တက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ နာတာရှည်လူမမာတွေနဲ့ မကြာခဏ ဖျားနာတတ်သူတွေအနေနဲ့ နဂါးမောက်သီးကို စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
(၃) အစာချေစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေတယ်
ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းအတွက် နဂါး မောက်သီးဟာ သဘာဝဆေးဝါးတမျိုးဖြစ်ပြီးအစာအိမ်တွင်းကအဆိပ် အတောက်တွေကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးနိုင်တာကြောင့်အစာအိမ်ကျန်းမာရေးပြဿနာရှိသူတွေ ပုံမှန်စားသုံးပေးသင့်တဲ့ အသီးတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
နဂါးမောက်သီးမှာသံဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် သွေးအား နည်းသူတွေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်အတွက်အထူးပဲ သင့်တော်ပါတယ်။
(၅) ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေတယ်
နဂါးမောက်သီးဟာကိုယ်တွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့အပြင်ဆီးလမ်းကြောင်းစနစ်ကို ကောင်း မွန်စေတာကြောင့်ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူတွေနဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါကာကွယ်လိုသူတွေအတွက်သင့်တော်ပါတယ်။
The Irrawaddy – Burmese Edition (HEALTH)
၁ နှစ် မှာ၁ကြိမ် သာ ပျော်ရွှင် ရတာမို့ လွတ်လပ် ခွင့်လေး ပေးပါ
“ပုတက်လေး တွေကို မသတ်ကြပါနဲ့”
၁နှစ်မှာ၁ကြိမ်သာ ပျော်ရွှင်ရတာ မို့ လွတ်လပ် ခွင့်လေး ပေးပါ
မိုးဦးကျ တာနဲ့ ပျော်ခဲ့ရ ပေမဲ့ မင်းတို့ရဲ့ ချိုပေစွ ဟင်းချိုတစ်ခွက် အဖြစ် ငါတို့ရဲ့ အပျော်တွေ ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ရတယ်
ငါတို့ရဲ့ရင်ကိုခွဲ မီးကြီးခဲ ရဲရဲပေါ်မှာ ငါတို့တစ်တွေရဲ့ သွေးစက် တွေ ခြောက်ကပ်ခဲ့ရတယ်
မင်းတို့တွေ တုတ် လက်နက် အစုံနဲ့ လာရင် ငါ့တို့အသိုက်အမြုံစီ အပြေးအလွှား ဝင်ပြီး ပုန်းခိုခဲ့ရတယ်
လူဆိုတဲ့ မင်းတို့ဟာအသိဉာဏ်ရှိတော့ ငါတို့ရဲ့ပုန်းခိုကျင်းလေးဟာမကာကွယ်နိုင်ခဲ့ဘူးလေအပြေးအလွှား ဆော့ကစားချင်တဲ့ငါတို့မှာရန်ငြိုးမရှိပဲ အသက်အဖျက်ခံနေရတယ်
မင်းတို့ရဲ့ခြေသံတွေကြားရင်ငါတို့ တွေနှလုံးသားတွေကြောက်ရွံ့နေ ရရှာတယ်
ရရှိတဲ့ ဘဝလေးမှာ ငါတို့လဲ လွတ်လပ် ပျော်ရွှင်စွာ နေချင်တာပေါ့ အိုမိတ်ဆွေတို့ရယ်။
Crd, U Thaw Zin Phyo. မောင်ရေစကြို
ကျားဟော်မုန်းဆေးတွေ မှားသောက်မိတာကြောင့် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်း ကိုပြောပြခဲ့တဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်
ပရိတ်သတ်ကြီးရေမော်ဒယ်သရုပ်ဆောင် ရှင်ယွန်းမြတ်ကတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ မြင်သူတိုင်း ၂ ခါပြန်ကြည့်ရလောက်တဲ့အလှအပတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မင်းသမီးလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကြောင့်ယောကျ်ားလေးပရိတ်သတ်အများအပြားရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကိုရရှိထားသူလေးပါနော်။
သူမကတော ခန္ဓာကိုယ်လှပဖို့အတွက် gym ကစားတဲ့အခါအမောဒဏ်ခံနိုင်ဖို့ရာအတွက်ဆေးသောက်ရာမှမှားယွင်းခဲ့တာကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပဲမီဒီယာများမှာဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ”သောက်မိတဲ့ဆေးကကိုယ်အခုဆော့နေတဲ့ gym ကရောင်းခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လလောက်က ခင်မင်ရတဲ့ gym trainer အကိုတစ်ယောက်ကသူကိုယ်တိုင်ကလည်းပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြိုင်တတ်တဲ့သူပါ။သူကဆေးတွေလည်း ရောင်းပေးတယ်ပေါ့။သူ့ကိုgym နဲ့ပက်သက်တာဆို messanger ကနေမေးလေ့ရှိတယ်။အဲ့ဒါသူ့ကို gym ဆော့ရင်ဆော့အားေ ကောင်းအောင်ဆေးသောက်ချင်တာဆိုတော့သူကလည်းဆးတစ်ခုပေးတယ်။အဲ့ဆေးမှာအလုံး ၆၀ ပါတယ် gym မဆော့ခင်နာရီဝက်အလိုမှာအဲ့ဒီဆေးကိုသောက်ရတယ်။ ၁ သိန်းခွဲလား ပေးရတယ်။
စစချင်း အဲ့ဒီဆေးကိုသောက်တော့ ဆေးသောက်ပြီး၂ပတ်လောက်မှာ gym ကစားရင်ကစားအားပိုကောင်းတယ်။ တစ်နေ့ကို ၃ နာရီ ၄ နာရီကစားနိုင်တယ်။အဆီတွေကို ချေဖျက်နိုင်တာဆိုတော့ ကစားရင် ကစားသလိုခန္ဓာကိုယ်က သိသာလာတယ်။အဲ့ချိန်ကခန္ဓာကိုယ်ကတင်ဆိုလည်းတင်သက်သက် ခါးဆိုရင်လည်းသေးသေးလေးဖြစ်ပြီးလှလာတယ်။အဲ့ဆေးကို တစ်လနီးပါးသောက်ပြီးနောက်ဆေးဘူးကုန်သွားတဲ့အခါကျ ထပ်လည်း မဝယ်ဖြစ်တော့ဘူး။ဆေးဆက်မသောက်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။
အဲ့ဆေးသောက်တာရပ်လိုက်ပြီးတစ်ပတ် ၁၀ ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါ မိန်းကလေးကိစ္စလည်းဖြစ်တော့ gym ဆော့တာကို နားလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာစိတ်က ဂယောက်ဂယက်တွေဖြစ်တယ်။ စိတ် ဓာတ်အတက်အကျတွေဖြစ်တော့ မိန်း ကလေးကိစ္စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်း မိန်းကလေးတွေကအဲ့ဒါမျိုး ဖြစ်တတ်တော့ အဲ့ဒါကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ပဲကိုယ်က တွေးလိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာ ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့မျက်နှာတစ်ခြမ်းကယောင်ပြီးဖောင်းလာတယ်။လက်တွေ ခြေထောက်တွေကလည်းဖောပြီး ယောင်လာတယ်။ဆေးခန်းသွားပြတော့ဆရာဝန်ကလည်းထုံးစံအတိုင်း gym ကစားလို့ ကြွက်သားတွေယောင်တာထင်တယ်ပေါ့။မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ခဏ gym နားဆိုတာနဲ့ နားလိုက်တယ်။
လူတွေက stess များလာတဲ့အချိန်ဆို အလိုလို အချိုကို တောင့်တလာတတ်ကြတယ်။ gym နားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဘာဖြစ်လာလည်းဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုအချိုမကြိုက်တဲ့သူက အချိုတွေပဲ စားချင်နေတယ်။အဲ့ချိန်ကမလှိုင်လုံးတွေ စားတယ်။ နွားနို့ဆိုလည်းချိုနေတာပဲသောက်တယ်။အစကတော့မသိဘူးကိုယ်ကလည်း gym ပြန်ဆော့မှာပဲဆိုပြီးအချိုတွေပဲစားတယ် ။နောက်တော့ တစ်ကိုယ်လုံးနာတာတွေကိုမခံနိုင်တော့ စိတ်တွေကလည်း တက်လိုက် ကျလိုက်ဆိုတော့နားလည်တဲ့သူကိုဒီဆေးသောက်တယ်ဒီလိုတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမေးကြည့်တော့သူက အဲ့ဆေးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဆေးက steroid တွေ ဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ အဲ့ဒါ ပုံမှန်ထက်လည်း အမောက မခံနိုင်တဲ့အခါ တစ်လနားမယ်ဆိုပြီး gym နားလိုက်တယ်။
gym က သိတဲ့ trainer အမက ပြောတဲ့အခါကျမှ အဲ့ဆေးအကြောင်းကို သေချာသိတော့တယ်။အဲ့ဆေးက မိန်းကလေးတွေကိုပေးရတဲ့ဆေးမဟုတ်ဘူး။ ယော က်ျားလေးသောက်ရတဲ့ဆေးအားကစားလုပ်မယ့်သူတွေပြိုင်ပွဲဝင်မယ့်သူတွေ ပြိုင်ပွဲဝင်ခါနီးမှာထုတင်တဲ့ဆေး ဖြစ်နေတာ။အဲ့ဆေးက အဆီတွေကို မြန်မြန်ချေဖျက်တယ်။ ကစားရင်ကစားသလောက် ကြွက်သားတွေကြီးထွားစေတဲ့ဆေးဆိုတော့ယောကျ်ားလေး ဟော် မုန်းဖြစ်စေတဲ့ ဆေးပေါ့။
အဲ့ဆေးသောက်နေတုန်းက ကိုယ့်ကို နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေ ပေါက်လာတာလားနဲ့ လာလာမေးကြတယ်။ ယောကျ်ားလေးတွေလိုတော့ ကြမ်းကြမ်းကြီးတွေ ထွက်လာတာ မဟုတ်ပေမဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးလေးတွေပေါက်လာတာပေါ့။ကိုယ်ကဘယ်လောက် ဝဝ မျက်နှာလေးကသေးသေးလေးပဲ။အဲ့ဆေးသောက်တုန်းကဆို မျက်နှာကမေးနှစ်ထပ်နဲ့ ဖောင်းပြီး ယောင်လာတယ်။လက်တွေဆိုလည်း ယောင်လာတယ်။ဘယ်နေရာအဆိုးဆုံးလဲဆိုရင်တင်ပါးက ၄၃ ထိဖြစ်သွားတယ်။ကျန်းမာရေးက အခုချိန်ထိတော့ ကောင်းနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့ အထဲမှာ ဘာတွေ ဖြစ်လဲဆိုတာတော့ကိုယ့်မျက်စိနဲ့ ကိုယ်မမြင်နိုင်ဘူးလေ။
သေချာတာတစ်ခုကအဲ့ဆေးတွေ သောက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကပုံမှန် မဟုတ်ဘူး။ဆေးကကျားဟော်မုန်းဆေး ဖြစ်နေလို့လားမသိဘူးအဲ့ချိန်မှာ ရည်းစားမရှိတာကံကောင်းသွားတယ်။ရည်းစားလည်းမထားချင်ဘူး။ယောကျ်ားလေးတွေကိုစိတ်မဝင်စားပဲကောင်မလေးတွေကိုပဲစိတ်ဝင်စားလာတယ်အဲ့စိတ်ကတော့ သိသာတယ်။
ကိုယ်ကလှချင်တယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကို တိုင်ပင်ပြီးမှ သောက်ပါကိုယ့်ဘာသာ မသောက်ပါနဲ့။ကိုယ့်ကို ဆေးရောင်းတဲ့သူကိုပြောချင်တာကသူကိုယ်တိုင်တောင် အဲ့ဒါကိုသိရဲ့လားမသိဘူး။ သူက professional တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ သူ့ကို ယုံကြည်လိုက်မိတာ။နောက်ပြီးအဲ့လိုဖြစ်တာကကိုယ်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုလည်း ဆင်ခြင်စေချင်တယ်။အဲ့လိုမှားပေးလိုက်တာက ရှင်ယွန်းတို့ဆို ခံနိုင်ရည်ရှိလို့လေ ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့သူဆို တစ်ခုခုတောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဆေးတွေက အရမ်းပြင်းတော့လေ။ ” ဆိုကာ သူမရဲ့ ဆေးမှားသောက်ခဲ့မိတဲ့အကြောင်းကို အခုလိုပဲ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
မြောက်ဦးမှပြန်လာပြီး၁၂ရက်ကြာ မှ Quarantine ဝင်ခဲ့ကြတဲ့တောင်ငူကညီအစ်မ၂ယောက်😱😱
မြောက်ဦး မှ ပြန်လာပြီး ၁၂ရက်ကြာ မှ Quarantine ဝင်ခဲ့ကြတဲ့ တောင်ငူက ညီအစ်မ၂ယောက်😱😱
ဩဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့ ည ၁၀ :၃၀ မိနစ်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့မှတောင်ငူမြို့သို့ပြန်လာသူ ညီအမတော်စပ်သူ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအား သီတဂူကျောင်သို့ Quarantine ဝင်ရန်အတွက်တောင်ငူမြို့COVIDထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အရေးပေါ်တုန့်ပြန်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်တောင်ငူမြို့နယ်အသက်ကယ်ယာဥ်များကွန်ယက်TANO အဖွဲ့ဝင်နန်းတော်ဦးလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့မှပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ် ။
အဆိုပါအမျိုးသမီး ၂ ဦးသည် တောင်ငူမြို့ ၁၇ ရပ်ကွက်မီးရထားရဲလိုင်းခန်းမှာနေထိုင်ကြပြီး သားဖြစ်သူရဲဝန်ထမ်း မြောက်ဦးမှာ တာဝန်ကျသူကို အတူတူလိုက်ပို့ကြရင်း ပြီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ် ၁၆ ရက်နေ့ကပြန်လာတာဖြစ်တယ်လို့ ရထားရဲဝန်ထမ်ူမိသားစုဝင်များနှင့်နီးစပ်သူထံကသိရှိရပါတယ် ။
Q မဝင်ခင်မနေ့က နေ့လည်ပိုင်းမှာ တောင်ငူမြို့စွန် ကောင်းမှုတော်ဘုရားနားက လဲဘူးရွာက ၎င်းတို့ရဲ့တူမအသုဘကို ရထားရဲဝန်ထမ်းမိသားစုဝင်ရဲမေတွေနဲ့အတူသွားခဲ့တယ်လို့လည်းစုံစမ်းသိရှိရပြီး ယနေ့လောလောဆယ်တော့ အတူသွားခဲ့သူ ၄ ဦးရဲ့အမည်စာရင်းကို ရယူသွားပါတယ် ။
အသုဘကိုသွားအတူတူသွားတဲ့ Hijet ကားသမားကိုလည်းလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်..
အမဖြစ်သူကတော့ ၁၂ ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ် ၊ မြောက်ဦးကိုအတူတူသွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ။
အဲ့ဒီနောက် ၎င်းတို့ပြန်လာပြီး ၁၂ ရက်တာကာလအတွင်းထိတွေ့ခဲ့သူစာရင်းများကိုလည်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးများက စိစစ်ကောက်ယူနေတယ်လို့ကြားသိရပါတယ် ။
NHL ပို့ပြီးစစ်ဆေးအဖြေ Positive မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဘဲဆုတောင်းပေးပါတယ် ဗျာ ။ မတော်တဆ Positive သာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ မတွေးရဲစရာပါ..
မိမိ ဘယ်ကနေ ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက်မှာပြန်လာပြီး မည်သူတွေနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းပြောပြဘို့လိုပါတယ် ၊ တာဝန်ရှိသူတွေလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြဘို့လိုပါတယ် ၊ လိမ်ညာဘို့မသင့်ပါဘူး ၊ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲဝန်ထမ်းကိုတော့ Q မဝင်ခိုင်းသေးဘူးလို့သိရပါတယ်…Q ဝင်ရတာရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး..
ဘာမှမဖြစ်ရင်တော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး. ဗျာ
သတင်း ( ခ/၂ )
ေျမာက္ဦး မွ ျပန္လာၿပီး ၁၂ရက္ၾကာ မွ Quarantine ဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ ေတာင္ငူက ညီအစ္မ၂ေယာက္😱😱
ဩဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ ည ၁၀ :၃၀ မိနစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွေတာင္ငူၿမိဳ႕သို႔ျပန္လာသူ ညီအမေတာ္စပ္သူ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးအား သီတဂူေက်ာင္သို႔ Quarantine ဝင္ရန္အတြက္ေတာင္ငူၿမိဳ႕COVIDထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္အေရးေပၚတုန္႔ျပန္ေရးအဖြဲ႕ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္အသက္ကယ္ယာဥ္မ်ားကြန္ယက္TANO အဖြဲ႕ဝင္နန္းေတာ္ဦးလူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕မွပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္လို႔သိ႐ွိရပါတယ္ ။
အဆိုပါအမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးသည္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ၁၇ ရပ္ကြက္မီးရထားရဲလိုင္းခန္းမွာေနထိုင္ၾကၿပီး သားျဖစ္သူရဲဝန္ထမ္း ေျမာက္ဦးမွာ တာဝန္က်သူကို အတူတူလိုက္ပို႔ၾကရင္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ္ ၁၆ ရက္ေန႔ကျပန္လာတာျဖစ္တယ္လို႔ ရထားရဲဝန္ထမ္ူမိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္နီးစပ္သူထံကသိ႐ွိရပါတယ္ ။
Q မဝင္ခင္မေန႔က ေန႔လည္ပိုင္းမွာ ေတာင္ငူၿမိဳ႕စြန္ ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားနားက လဲဘူး႐ြာက ၎တို႔ရဲ႕တူမအသုဘကို ရထားရဲဝန္ထမ္းမိသားစုဝင္ရဲေမေတြနဲ႔အတူသြားခဲ့တယ္လို႔လည္းစုံစမ္းသိ႐ွိရၿပီး ယေန႔ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အတူသြားခဲ့သူ ၄ ဦးရဲ႕အမည္စာရင္းကို ရယူသြားပါတယ္ ။
အသုဘကိုသြားအတူတူသြားတဲ့ Hijet ကားသမားကိုလည္းလိုက္လံစုံစမ္းေနပါတယ္..
အမျဖစ္သူကေတာ့ ၁၂ ရပ္ကြက္မွာေနထိုင္သူျဖစ္ပါတယ္ ၊ ေျမာက္ဦးကိုအတူတူသြားခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္ ။
အဲ့ဒီေနာက္ ၎တို႔ျပန္လာၿပီး ၁၂ ရက္တာကာလအတြင္းထိေတြ႕ခဲ့သူစာရင္းမ်ားကိုလည္း ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားက စိစစ္ေကာက္ယူေနတယ္လို႔ၾကားသိရပါတယ္ ။
NHL ပို႔ၿပီးစစ္ေဆးအေျဖ Positive မျဖစ္ပါေစနဲ႔လို႔ ဘဲဆုေတာင္းေပးပါတယ္ ဗ်ာ ။ မေတာ္တဆ Positive သာျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ မေတြးရဲစရာပါ..
မိမိ ဘယ္ကေန ဘယ္ေန႔ ဘယ္ရက္မွာျပန္လာၿပီး မည္သူေတြနဲ႔ထိေတြ႕ခဲ့တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းေျပာျပဘို႔လိုပါတယ္ ၊ တာဝန္႐ွိသူေတြလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာျပဘို႔လိုပါတယ္ ၊ လိမ္ညာဘို႔မသင့္ပါဘူး ၊ ခင္ပြန္းျဖစ္သူရဲဝန္ထမ္းကိုေတာ့ Q မဝင္ခိုင္းေသးဘူးလို႔သိရပါတယ္…Q ဝင္ရတာ႐ွက္စရာမဟုတ္ပါဘူး..
ဘာမွမျဖစ္ရင္ေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး. ဗ်ာ
သတင္း ( ခ/၂ )
Categories Covid-19 Tags ကိုဗစ် ၁၉, တောင်ငူ, မြောက်ဦး
သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်မှစပြီး ရခိုင် ကနေ ရန်ကုန်ကို လေယာဉ်နဲ့လာသူ ၅၄၀၀ ကျော်သက်ဆိုင်ရာ ကို သတင်းပို့ရန် ပျက်ကွက်ပါက အရေးယူမည်
သတင်းမပို့ပါကအရေးယူမှုတွေလုပ် ဆောင်သွားမှာပါ။ ဩဂုတ်လ (၁၀)ရက်နေ့က စပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကနေရန်ကုန်ကို လေကြောင်းလိုင်းကလိုက်ပါခဲ့သူများ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဌာနတွေကို အကြောင်းကြားဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာနက ဒီကနေ့ညမှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု မြန်ဆန်နေတဲ့ကိုဗစ်ပိုးကို အချိန်မီထိန်းချုပ်နိုင်ရန် အတွက်ရခိုင်ကပြန်လာသူများကို ကွာရန်တင်းထားရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်မှာဩဂုတ်လ (၁၆)ရက်နေ့က ပြည်တွင်းကူးစက်လူနာတစ်ဦး တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်ဆက်တိုက်ဆိုသလို ပြည်တွင်းကူးစက်လူနာတွေတွေ့ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိပြည်တွင်းကူးစက်လူနာတွေထဲမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်က အများစု ပါဝင်နေတာကြောင့် ရခိုင်ကနေ ပြန်လာတဲ့သူအားလုံးကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာတိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေအလိုက်အသွားအလာတွေကန့်သတ်ကာကွာရန်တင်းထားရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဩဂုတ် လ(၁၀)ရက်နေ့စပြီး လေကြောင်းလိုင်းက တစ်ဆင့် ရခိုင်ကနေ တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကိုလိုက်ပါလာတဲ့ခရီးသည် (၅၇၀၀) ကျော်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဆိုပါ ခရီးသည် (၅၇၀၀)ကျော်ထဲမှာ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်ကနေ ၂၁ ရက် အတွင်းရန်ကုန်ကိုလိုက်ပါလာတဲ့သူက ၅၄၀၀ ကျော်ရှိပြီးထိုလူများအနေနဲ့ နီးစပ်ရာကျန်းမာရေးဌာနဲ့ သက်ဆိုင် ရာအဖွဲ့အစည်းတွေထံ အမြန်ဆုံးသတင်းပို့ဖို့ ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။လိုက်ပါလာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ အချိန်မီစာရင်းပေးပို့မှရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွါးမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးသတင်းပေးပို့ရန် ပျက်ကွက်တဲ့သူတွေက်ုလည်းသဘာဝဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေနဲ့ အရေးယူသွားမယ်လို့ ညွှန်ကြားချက်မှာပါရှိပါတယ်။